कोरोना आशंका गरिएकी युवतीको वीर अस्पतालमा मृत्यु — Sanchar Kendra
काठमाडौं । वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको आशंकामा भर्ना भएका एक जना युवतीको मृत्यु भएको छ । वीर अस्पतालको निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीका अनुसार उनलाई सोमबार बिहान बेहोस अवस्थामा अस्पताल ल्याइएको थियो ।
‘उनी भारतबाट यही साता नेपाल आएकी रहिछन् । यहाँ ल्याउदाँ ज्वरो पनि थियो, स्वास फेर्न पनि गाहो भइरहेको थियो’ निर्देशक सेञ्चुरीले भने, ‘ हामीले कोरोनाको शंका गरेर उनको नमुना टेकु ल्याबमा पठाएका छौ । यहाँ उनलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको थियो ।’ मृत्य हुने ती युवती चन्द्रागिरी नगरपालिका १५ कि रहेकी बताएको छ ।
यसअघि लतिलपुरस्थित पाटन अस्पतालको आइसीयूमा राखिएका कोरोना आशंका गरिएका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियाे । धादिङ खनियाँपानी घर भएका ३५ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको हो ।
विप्लवसँग वार्ता सकिएलगत्तै एकाएक सैनिक मुख्यालय किन पुगे प्रधानमन्त्री ओली ?
सरकार र विप्लव नेकपाबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो, के-के बिषयमा भयो छलफल ?